Ikongo : nandrasana ao an-toerana ireo razana sivy | NewsMada
Ikongo : nandrasana ao an-toerana ireo razana sivy
Efa hita avokoa ireo razana mpitandro filaminana sivy izay tsy hita popoka tao anatin’ny andro vitsy tany Ikongo. Nentina tao Ikongo izy ireo ka ny andron’ny alatsinainy, efa notaterina tamin’ny fiara niakatra any amin’ny faritra niaviany ny sasany. Raha ny fantatra, ireo telo voalohany, izany hoe ireo polisy roa sy miaramila iray ireo efa nalefa nody an-tanindrazany. Ny ambiny kosa, izay hita manaraka, mbola nentina ao Ikongo aloha.
Ankoatra izay, fantatra tamin’ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa misy ny voafonja izay nitsoaka kanefa niverina tsikelikely nanatona ny fonja. Tsy mbola nisy ny tarehimarika ofisialy nampitaina momba izany ary mitombo hatrany koa ny isa, raha ny vaovao avy any an-toerana hatrany.
Voalaza koa anefa fa momba ny fidinan’ny mpitandrofilaminana marobe any an-toerana, tsy tena fampandrian-tany loatra ny anton-dian’izy ireo fa mifantoka amin’ny fanabeazana ho olom-pirenena ny vahoaka sy fampahafantarana ny lalàna. Afakomaly, navondron’izy ireo tao amin’ny tranobe tao Manankazo ny vehivavy sy ny tanora ary nampitaina izany fanabeazana izany. “Ato ho ato kosa, ny vatan-dehilahy indray no hampitana izany fahalalana”, hoy ny fanazavana. Azo lazaina fa miverina amin’ny laoniny ny filaminana any Ikongo. Somary raiki-tahotra ihany ny olona sasany nahita ireo mpitandro filaminana mirongo basy teo aloha teo. Maro ny nihevitra fa hanao valifaty ireto mpitandro filaminana ireto. Ny tany Ikongo rahateo voalaza fa efa ela no nilamina fa nisy ny nanely tsaho fa mbola mikorontana tany an-toerana. Teo ihany koa ny fanalana ireo mpitsara tany Ikongo. Ny praiminisitra tetsy andaniny nanamafy fa milamina any amin’izao fotoana izao, ary atao ny hisian’ny filaminana saingy tsy maintsy misy ny fanadihadiana misokatra tsy ho ela. “Tsy maintsy hisy ny fanadihadiana hahafantarana ny anton’ny korontana”, hoy izy.